Zinedine Zidane Oo Saaka Salaaddii Iska Xaadiriyey Garoonka Tababarka Real Madrid Iyo Laba Saacadood Oo Uu Cidlo Taagnaa – Cadalool.com
Zinedine Zidane Oo Saaka Salaaddii Iska Xaadiriyey Garoonka Tababarka Real Madrid Iyo Laba Saacadood Oo Uu Cidlo Taagnaa
Zinedine Zidane ayaa saaka Salaaddii hore ku kallahay xarunta tababarka Real Madrid ee Valdebas, halkaas oo uu durba ka bilaabay shaqadiisii ugu horreysay kaddib markii doraad dib loogu magacaabay tababare.
Zidane oo ay la socdaan gacan-yareyaashiisa ayaa 9-kii subaxnimo ee waqtiga Madrid tegay garoonka carbiska, waxaanay muddo laba saacadood ah ku sugayeen ciyaartoyga oo ballantu ahayd inay 11-ka subaxnimo yimaaddaan.
Tababarka koowaad ee Zidane ayaa ku bilaabmayay jewi albaabadu u xidhan yihiin oo ay warbaahintu dibedda ka joogto, waxaana uu halkaas kula midoobay laacibiintii uu sida lama filaanka ah u nabad-galeeyey toban bilood ka hor.
Zidane oo Isniintii si ramsi ah loogu soo bandhigay warbaahinta isagoo ah tababaraha beddelay Santiago Solari, ayaan Salaasadii fursad u helin ciyaartoyga maadaama ay fasax ahaayeen, hase yeeshee waxa xarunta Valdebebas joogay laba laacib oo dhibaato ka tirsanayey tababarihii shaqada laga caydhiyey.
Isco iyo Marcelo oo Solari ka xaaraantimeeyey garoomada muddadii uu xilka hayey ayaa kaligood joogay garoonka, waxaanay samaynayeen jimicsiyo kala duwan si ay ula jaan-qaadaan Zinedine Zidane oo ay kalsooni ku qabaan inuu ula dhaqmi doono qaab ka duwan sidii Solari.
Si kastaba ha ahaatee, Zidane ayaa tababar adag siin doona ciyaartoyga Real Madrid ka hor kulanka Celta Vigo ee ay Sabtida kusoo dhoweyn doonto Santiago Bernabeu.